Fihetseham-po miavaka amin'ny ankizy. Fanandramana amin'ny rano, afo ho an'ny ankizy ao an-trano.
Ny ankizy rehetra, ankoatra izany, dia toy ny mistery, fisehoan-javatra mifono mistery sy tsy mahazatra. Ny ankamaroan'ny ankizy dia manao fanandramana mahaliana, ny sasany amin'izy ireo dia azo apetraka ao an-trano, tsy mangataka fanampiana amin'ny ray aman-dreny na olon-dehibe hafa.
Fandraharahana izay azo atao amin'ny ankizy
Tsy ny fanandramana rehetra dia mety ho an'ny ankizy. Ny sasany amin'izy ireo dia mety hampidi-doza ny fiainana sy ny fahasalaman'ny zaza, indrindra fa ny ankizy mianatra any am-pianarana. Na izany aza, eo ambany fanaraha-maso sy fanaraha-maso ny ray aman-dreny na olon-dehibe hafa, ny ankizy dia afaka manao fanandramana mampientanentana - ny tena zava-dehibe dia ny fanarahamaso akaiky ny fanarahana ny fepetra takiana ilaina.
Ny fanandramana ara-tsiansa rehetra ho an'ny ankizy dia tena ilaina. Mamela ny mpamorona tanora hamantatra ny toetra amam-pihetsika samihafa sy ny zavatra, ny zavatra simika sy ny maro hafa izy ireo, hahatakatra ny antony mahatonga ny tranga sasany ary hahazo traikefa azo tsapain-tànana izay azo ampiharina any aoriana. Ankoatr'izany, ny sasany amin'ireo fanandramana ireo dia aseho ho toy ny tricks, mba hahafahan'ny zaza hahazo ny fitokisana eo amin'ny namany sy ny namany.
Fanandramana amin'ny rano ho an'ny ankizy
Ny olona rehetra amin'ny fiainana andavanandro dia mampiasa rano matetika ary tsy mieritreritra mihitsy hoe manana toetra mahagaga sy mahagaga izy. Mandritra izany, miaraka amin'ity ranom-panafody ity dia afaka manao fanandramana mahaliana amin'ny ankizy ianao. Ohatra, ireo ankizilahy sy ankizivavy ao an-tokantrano dia afaka manao ireto fanandramana manaraka ireto:
"Mitsangana ny napkin." Fenoy ny plastika misy kaopy misy rano 1/3. Apetaho im-betsaka ny napkin, mba hahatonga ny lavaka lava lava. Avy eo dia tapaho ny sombin-kazo iray eo amin'ny 5 sm eo ho eo, mamelà azy ary asio marika maromaro eo amboniny miaraka amin'ny marika miloko. Tokony hahazo loko miloko ianao, amin'ny lafiny iray tsy mahatratra ny sisiny amin'ny 5-7 cm. Aorian'io toerana io ny napkin amin'ny rano, mametraka azy amin'ny lafiny izay misy ny tsipika miloko. Ho gaga ilay zaza, ka nahamarika fa ny rano dia mitsangana sy mandoko ny tapa-damba sisa tavela amin'ny loko marevaka.
"Ny Rainbow Water." Ao amin'ny faran'ny lakandrano, mametraka fitaratra kely ary mameno azy amin'ny rano. Raiso ny jiron'ny fanaovan-jiro, atsangano ary apetaho eo amin'ny fitaratra ilay teboka. Miezaha hitazona ny tara-pahazavana mitaratra amin'ny taratasy fotsy hoditra iray, ary ho gaga ianao hahita fa nisy avana mamirapiratra mamirapiratra.
Fihetseham-po amin'ny afo ho an'ny ankizy
Amin'ny afo dia ilaina ny manao fanatanjahan-tena manokana, saingy miaraka amin'izany dia azo atao ny mametraka fanandramana mahaliana ho an'ny ankizy. Andramo miaraka amin'ny taranakao ny iray amin'ireto fanandramana manaraka ireto:
Ny "rocket". Alao ny kitapo divay ary esory daholo ny ao anatiny. Avy amin'ny shell, manaova endrika izay mitovy amin'ny loko sinoa Shinoa. Ampandehano miaraka amin'ny lalao izy ary jereo ny fomba hialan'ny balafomanga kely!
Shadow Theatre. Hazòny ny lalao ary ento eo amin'ny rindrina 10-15 cm ny haavony. Hamirapiratra ny jirony mba hahazoana aloka, ary ho hitanao fa ny tànanao sy ny lalao ihany no hiseho eo amin'ny rindrina. Ny lelafo tsy manary aloka.
Manandrana sira ho an'ny ankizy
Ny fanandramana mahaliana ho an'ny ankizy dia azo tanterahana miaraka amin'ny akora goavambe, ohatra, amin'ny sira. Ireo lehilahy dia ho toy ny fanandramana toy ny:
The Lava Lamp. Fenoy rano ny vera misy rano, ary fenoy ny solika miaraka amin'ny menaka manjelatra. Ho an'ny fanandramana ny fanandramana, ampio rano fisotro madio vitsivitsy. Dia asio tsikelikely mandalo siny kely sira ao anatin'io entona io. Jereo ny valiny - Hahazo akanjo mamirapiratra sy tsara tarehy ianao, izay mitovy amin'ny lava.
"Ny kristaly kristianina." Ity zavatra ity sy ny fanandramana mitovy amin'izany ho an'ny ankizy dia mitaky fotoana ampy ho an'ny fitondran-tenany. Mandritra izany fotoana izany, ny valin'ny fanandramana tahaka izao dia mendrika ny ezaka najoro teo aminy. Manomàna vinaingitra saline tsara voasesika - ny ampahany vaovao amin'ny sira ao dia tsy tokony hamongotra intsony. Dia afeno ny tady miaraka amin'ny loop iray amin'ny farany ary hametraka ilay container amin'ny toerana mafana. Ao anatin'ny andro vitsivitsy dia ho hitanao eo amin'ireo jiro sira kristaly tsara tarehy.
Fanandramana amin'ny soda ho an'ny ankizy
Ny fanandramana tsy dia fahita firy ho an'ny ankizy dia azo atao amin'ny soda entina, ohatra, "Vulcan". Asio tavoahangy plastika kely eo ambony latabatra ary ento manodidina azy ny volkano misy tanimanga na fasika. Manolora siramamy 2 eo ho eo ao anaty fitoeran-drano, manampy 50-70 ml rano mafana, ranomamy vitsivitsy mofomamy mamy mena, ary amin'ny farany - ampahefatry ny vinaingitra vita amin'ny vera. Eo imason'ny masonareo dia hisy fipoahana tanteraka amin'ny volokano, ary ho faly ilay zaza.
Ny fanandramana hafa ho an'ny ankizy manana soda baka dia azo hatsangana eo amin'ny fananan 'ity zavatra ity ho kristaly. Mba hahazoana kristaly dia azonao atao ny mampiasa fomba mitovy amin'ny sira. Mba hanaovana izany, dia ilaina ny manomana voly soda goavam-be izay tsy azo tsinontsinoavina intsony ny vovo-tsokajy, ary mametraka tady vy na zavatra hafa ao ary mametraka azy mandritra ny andro maromaro ao amin'ny toerana mafana. Tsy haharitra ela ny valiny.
Fihetseham-po amin'ny baolina ho an'ny ankizy
Matetika ny fanandramana sy ny fanandramana ho an'ny ankizy dia mifandraika amin'ny karazana baolina samihafa, toy ny:
"Indro fa tsy mamafy izy!". Miezaha hidina ny baolina fandrehitra ary ampidiro rano be lavenona eo amin'ny tampony sy ny tendrony, eo afovoany. Miaraka amin'ny hetsika maranitra amin'ny tanana, manaisotra ny baolina amin'ny kitapo hazo amin'ny toerana tena izy, ary ho hitanao fa mbola mitoetra izy.
"Ady amin'ny afo." Atsaharo ny labozia ary apetraho eny amin'ny latabatra. Aorian'izany dia afeno ny baolina ary ento eo akaikin'ny lelafo. Ho hitanao fa hipoaka haingana izany. Ao anaty vilia iray hafa, arotsaho ny rano, afatory ary hazòny amin'ny labozia. Rehefa afaka kelikely dia ho hitanao fa lasa baomba mandrehitra ny baolina ary manakana ny lelafo.
Fanandramana amin'ny atody ho an'ny ankizy
Ny fanandramana mahaliana sasany amin'ny ankizy dia azo atao amin'ny alalan'ny atody akoho, ohatra:
"Tsy manidina izany." Atsofohy ao anaty vera ny rano ary manindrona ny atody akoho. Hidina any ambany izy. Dia alaivo ilay zavatra ary esory ao anaty ranom-boasary sira 4-5 sira, ary avereno any izany. Ho hitanao fa aty ambonin'ny rano ny atody.
Egg miaraka amin'ny hairaha. Tsy ny fanandramana rehetra natao ho an'ny ankizy dia vita haingana, ny fanandramana sasany dia tsy maintsy mandany andro vitsivitsy. Avy amin'ny atody mena, esory ny ao anatiny ary fenoy izany amin'ny landihazo. Apetraho ao anaty lavaka fantsona fotsy ny kirany, alatsaho ao anaty vozon'ny alfalfa ary atsipazo miaraka amin'ny rano izy ireo. Apetraho eo am-baravarankely izany, ary aorian'ny 3 andro dia ho hitanao fa nanomboka naniry "volo" ny volonao.
Fanandramana miaraka amin'ny lemon-jaza ho an'ny ankizy
Ny zavatra rehetra azo ampiasaina hanatanterahana ireo fanandramana. Ny fikarakarana manokana koa dia nalaina tamin'ny fanandramana mahaliana miaraka amin'ny citrony, ohatra:
"Fifidianana Akama". Avy amin'ny bibilava iray manontolo dia misintona ny ranom-boankazo, ary asio borosin-driaka ao aminy ary soraty eo aminy ny teny rehetra. Avelao hivoaka ny hafatra miafina. Ny taratasy dia ho madio tanteraka, saingy raha mihazona azy amin'ny vy ianao dia hiseho avy hatrany ny teny rehetra!
"Battery." Misorata tsara ary esory ny kitrokely. Raiso ny tady varahina roa 10 cm ny elany ary aforony ny faraingony. Ampidiro ao anaty lisitry ny vy ny clip misy vy ary alamino ny iray amin'ireo adiresy ao anatiny, ary ny teboka faharoa dia ao anaty citrus raha lavitry ny 1-1,5 cm avy amin'ny clip. Farany maimaimpoana maimaim-poana 2 farafahakeliny varimbazaha, ampifanaraho amin'ny fifandraisan-davitra, ary ho hitanao fa hamirapiratra izany!
Fihetseham-po amin'ny loko ho an'ny ankizy
Ny ankizy rehetra dia tia manintona, fa ny tena mahaliana azy ireo dia ny fanandramana fanandramana amin'ny loko. Andramo ny iray amin'ireto fanandramana manaraka ireto:
"Loko miloko". Makà kaopy kely kely vitsivitsy, izay isaky ny toerana dia mamela ny 2 latsaka amin'ny lakaoly BF ary 2 latsaka amin'ny loko acrylic misy loko iray. Atongilano tsara ny fanafody. Omeo ranom-boankazo ampy tsara ao anaty koveta na fitehirizan-drano hafa. Ampiasao koa ny rano mangatsiaka, ary ho hitanao fa mifankatia izy ireo, mamolavola faritra marobe mamirapiratra.
"Mangoraka indray ny ranomasina." Makà tavoahangy tsy misy ilana azy ary fenoy rano amin'ny antsasaky ny rano. Ampio ranom-borona vitsivitsy, ary alatsaho ao amin'ny ¼ ny volvan'ny menaka manjelatra. Fenoy ilay tavoahangy ary apetraho eo anilany. Asio izy amin'ny lalana samihafa, ary ho hitanao fa miforona ny onjan'ny onjam-borona izay mitovitovy amin'ny tafio-drivotra.
Fitsipika momba ny lalao amin'ny sokajy
Lalao an-dalam-piainana amin'ny toby famaranana
Fanamboarana ny varavarankely amin'ny lohataona ao amin'ny kindergarten
Fihetseham-behivavy iray ao anatin'ny herintaona
Ny latabatry ny ankizy, miovaova haingana
Fampianarana ara-moraly ho an'ny ankizy ao amin'ny sokajin-taona
Ny sezan'ny ankizy
Antso ho an'ny alika pomeranian
Ny Museum Ocean Oceanographic
Saripikan'ny ririnina eny an-dalambe
Prothrombin no fitsipika
Sakafo Roe - tsara sy ratsy
Toerana mena amin'ny tongotra
Cocktails miaraka amin'ny whisky - hevitra isan-karazany momba ny zava-pisotro misy alikaola isaky ny tsiro
Famaranana ny fototry ny trano ambanin'ilay vato
Ahoana no hanamafisana ny volo amin'ny fahaverezana?
Rahoviana no mitaiza ny zaza vao teraka?
Tokony ho maotina ve ny fahamaotinana? Nanafika indray ny mpanatrika i Angelina Jolie
Ahoana no hiantsoana vampira?
Ahoana ny fomba hanentanana tsara ny lehilahy?
Trondro natono tao anaty lafaoro